Madaxda AMISOM oo dooneysa in uusan dhamaan howlgalka ay kawadaan Soomaaliya – Somali Top News
Madaxda AMISOM oo dooneysa in uusan dhamaan howlgalka ay kawadaan Soomaaliya
November 24, 2018 Somali Top News	0 Comments
Taliyaha Guud ee Ciidanka Difaaca Uganda Gen Devid Muhuuzi ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay madaxda ugu sarreysa Taliska AMISOM iyo Taliyayaasha Ciidamada Uganda.
Taliyaha ayaa u yimid qiimeyn uu ku sameynayay howlaha AMISOM ee Somaaliya gaar ahaa Ciidamada Uganda sida uu howlgalkooda u waafaqsanyahay qprsha howleedka loo soo diray.
Mr Muhuuzi ayaa isaga oo la hadlayay saraakiisha AMISOM ee ku sugan Xerada Xalane waxaa uu sheegay in loo baahanyahay in AMISOM af fuliso qorsha howleedka Golaha amaaanka ee Qaramada Midoobey ee waafaqsan ka bixitaanka Ciidanka AMISOM ee Soomaaliya.
Ciidamada dalkiisa ka socda ee Uganda ayuu sheegay in ay shaqadooda si saxan u gudunayaan inta uu ka soo arkayna ay tahay hab waafaqsan qorshe howleedka shaqadooda.
Waxaa uu u tacsiyeeyay Ciidamada AMISOM ee ku dhintay ama ku dhaawacmay Soomaaliya,kuwaas oo uu ku tilmaamay geesiyada Afrika.
Mr Muhuuzi ayaa mar wax laga weydiiyay qiimaha Uganda uga baxay Soomaaliya ku jawaabay “adduunka oo dhan waa uu ogyahay in Uganda ay suuragal ka dhigtay howlgal loo heystay in uusan suuragal ahayn,markii ay Ciidankeeda ku billowday Soomaaliya.”
Waxaa kale oo uu sheegay in arrinta la xiriirta dhimis dheeraad ah oo lagu sameeyo Ciidamada AMISOM gaar ahana Uganda ay tahay mid miiska saaran oo ay doodeeda socoto,waxaana uu sidoo kale xusay in ay suuragal tahay in waqtigaba loo kordhiyo AMISOM si guulihii la gaaray aysan u khasaarin.
← Somalia invites Pakistani businessmen to initiate joint ventures
Holwgallo ciidan oo ka socda dagmada Balad-xaawo →
Dowladda Soomaaliya oo xirtay Wariye katirsan warbaahinta Goobjoog
May 28, 2019 May 28, 2019 Somali Top News 0
Francisco Madeira oo wada shaqeyn u balan qaaday Madaxweynaha Puntland